TRUMP oo si rasmi ah u amray soo saarista ciidanka Mareykanka ee Soomaaliya - Caasimada Online
Home Warar TRUMP oo si rasmi ah u amray soo saarista ciidanka Mareykanka ee...
TRUMP oo si rasmi ah u amray soo saarista ciidanka Mareykanka ee Soomaaliya
Washington (Caasimada Online) – Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa amray Waaxda Gaashaandhigga iyo taliska ciidamada Mareykanka ee Africa (AFRICOM) in inta badan ciidamada iyo hantida Mareykanka laga soo saaro Soomaaliya, horraanta 2021.
Illaa iyo hadda ma cadda tirada ciidamada Mareykanka ee laga soo saarayo Soomaaliya, hase yeeshee Waaxda Gaashaandhigga ayaa u muuqata inay soo jeedineyso in dhammaan ciidamada Mareykanka dib loogu meeleyn doono meelo kale oo Africa ka mid ah, iyo saldhigyo kale oo gobolka ah.
“Mareykanka kama baxayaan Africa, waxaa naga go’an inaan garab taagnaano oo aan teegeero joogto ah siino saaxibadeena Africa,” ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay Pentagon-ka.
“Inkasta oo la beddelayo booska ciidamada, ficilkan lama macno ah in la beddelayo siyaasadda Mareykanka. Waan sii wadi doonnaa inaan wiiqno ururada xagjiriinta ah, ee halis gelin kara dalkeena, inaga oo islamarkaana xaqiijineyna inaan ilaashano faa’iidadeyna istaraatiijyadeed,” ayuu qoraalka intaas ku daray.
“Natiijada go’aankan dartiis, qaar ka mid ah ciidamada ayaa la geyn doonaa meel ka baxsan Bariga Africa. Hase yeeshee ciidamadeena laga soo qaadayo Soomaaliya waxaa la gayn doonaa dalalka deriska ah, si taas ay noogu ogolaato inaan sii wadno cadaadiska aan saareyno argagixisada Soomaaliya,” ayaa lagu yiri qoraalka.
Pentagon-ka ayaa sheegay inay weli awood u yeelan doonaan inay fuliyaan howlgallo argagixiso la dirir oo bartilmaameedsan oo laga fuliyo Soomaaliya, ayna ururiyaan digniino horudhac iyo tilmaamaha halisaha ku iman kara dalka Mareykanka.